इजरायलमा संसदको निर्वाचन, नेतान्याहूको अग्निपरीक्षा « प्रशासन
इजरायलमा संसदको निर्वाचन, नेतान्याहूको अग्निपरीक्षा
जेरुसलेम । इजरायलमा मङ्गलबार १२० सदस्यीय संसद (नेसेट) का लागि चुनाव हुँदैछ । चार पटक प्रधानमन्त्री रहिरहेका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू यसपटक पनि चुनावी मैदानमा छन् ।
भ्रष्टाचारको आरोपका कारण विवादमा तानिएका प्रधानमन्त्री नेतान्याहूलाई पूर्व सैनिक प्रमुख बेन्नी गान्जले यस पटकको चुनावमा कडा चुनौती दिने अनुमान गरिएको छ । तर राजनीतिमा त्यति अनुभव नभएका पूर्व सैनिक प्रमुखलाई बेन्जामिन नेतान्याहूलाई परास्त गर्न निकै कठिन हुने प्रक्षेपणहरु पनि आएका छन् ।
मतदान निकै प्रतिस्पर्धी हुने भएकाले एकलौटी सरकार गठन गर्न कठिन हुने जनमत सर्वेक्षणहरुले देखाएका छन् । तर प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले नै गठबन्धन सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको देखाएका छन् । चुनावको अन्तिम नतिजा भने बुधबार बिहान प्राप्त हुनेछ ।
पूर्व सैनिक प्रमुख गान्जले प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले मुलुकमा विभाजनकारी राजनीति गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री नेतान्याहूको सुरक्षा सेवाप्रतिको धारणा नै गलत रहेको बताएका छन् ।
यो चुनाव ६९ वर्षीय वरिष्ठ नेता नेतान्याहूका निम्ति धेरै किसिमबाट जनमतसङ्ग्रह सरह रहेको छ । नेतान्याहूले इजरायलको सुरक्षा र आर्थिक वृद्धिका निम्ति विशिष्ट कार्यसम्पादन गरेको भन्दै सम्मान दिने गरिएको छ । तर नेतान्याहूको बढ्दो प्रचारबाजी र भ्रष्टाचारको आरोपका कारण कतिपय जनता परिवर्तनको पक्षमा उभिएका छन् ।
यसपटकको चुनावी अभियानका क्रममा प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले विपक्षीहरुमाथि कटुतापूर्ण चुनावी नारा प्रयोग गरेका छन् । चुनावी अभियानलाई नजिकबाट हेरिरहेका टिप्पणीकारहरुले अरब इजरायली र अरुमाथि प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले चरम दुश्मनका रुपमा व्यवहार गरेकामा पनि आलोचना गरेका छन् ।
नेतान्याहूले चुनाव हुनु तीन दिनअघि मात्र एउटा विवादास्पद प्रतिज्ञा गरेका छन् । आफू विजयी भएमा पश्चिमी किनारामा रहेका इजरायली बस्तीलाई इजरायलमै गाभ्ने नेतान्याहूले घोषणा गरेका छन् ।
इजरायलको सीमालाई पश्चिमी किनारामा विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री नेतान्याहूको विवादास्पद भनाईले प्यालेस्टिनीसँग यसअघि भएको दुई– देश समाधानको आशालाई समाप्त गर्ने स्पष्ट छ ।
दुई–देशको मान्यता दिने, इजरायल, राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यसअघिको प्रतिबद्धतालाई यो घोषणाले अबमूल्यन गरेको छ । इजरायलका अति दक्षिणपन्थीहरुको यो लामो समयदेखिको चाहना र कदम हो ।
नेतान्याहूले आफूलाई इजरायलको अत्यावश्यकीय राजनेताका रुपमा चित्रण गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । चुनावी दौड अन्तिम चरणमा पुगेकै अवस्थामा पनि उहाँले आफ्ना निकटतम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र ब्राजिलका राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारोसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
चुनावी प्रचारका क्रममा उनले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पबाट जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी र गोलान हाइट्सको सार्वभौमसत्ता इजरायलकै भएको मान्यता दिलाउन सफल भएको बताएका थिए । उनले पश्चिमी किनाराका इजरायली बस्तीलाई इजरायली सार्वभौमसत्ताभित्र समायोजन गर्ने योजना बारेमा अमेरिकी नेतृत्वलाई जानकारी गराइसकेको पनि बताए ।
“कसले यो कार्य गर्न सक्छ रु साँच्चिकै भन्नुपर्छ, अरु कसैले यो कार्य गर्न सक्दैन,’ नेतान्याहूले आइतबार स्थानीय समाचार पोर्टल आरुज् शेभालाई दिएको अन्तर्वार्तामा बताएका छन् ।
विश्वका अघिल्तिर को उभिन सक्छ ? अमेरिकी कङ्ग्रेसलाई कसले सामना गर्न सक्छ ? कसले जनताको विचारलाई त्यसतर्फ लैजान सक्छ ?
यसैबीच, उनले ट्रम्पकै शैली अपनाउँदै भने – भ्रष्टाचारको अनुसन्धान केबल मलाई कमजोर देखाउन मात्र गरिएको हो, त्यसमा कतै सत्यता छैन ।
सोमबार राति प्रधानमन्त्री नेतान्याहू प्रार्थनाका निम्ति जेरुसेलमको पश्चिमी पर्खाल पुगे ।
पूर्व सैनिक ५९ वर्षीय गान्जले पनि पार्टी गठन गरी नेतान्याहूलाई चुनौती दिन कम्मर कसेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री नेतान्याहू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै अब आमजनताले नेतान्याहूलाई बिदा गर्ने समय आइसकेको छ भने ।
उनले पश्चिम किनारालाई इजरायलमा गाभ्ने नेतान्याहूको योजना दक्षिणपन्थी मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने ‘गैरजिम्मेवार’ प्रयास मात्र रहेको आरोप लगाए ।
गान्जले विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार्य शान्ति सम्झौतालाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । पश्चिम किनाराका बस्ती र त्यहाँको सुरक्षा जिम्मा इजरायलले गर्नुपर्ने धारणा उनको छ । उनले कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय कदम नचाल्ने स्पष्ट गरेका छन् ।
अहिले परिवर्तनको आवश्यकता छ र परिवर्तनको अवसर पनि प्राप्त भएको छ, गान्जले इजरायली सेनाको रेडियोमा बोल्दै भने । ‘इजरायलले एकता, सम्बन्ध र आशा जगाउनुपर्ने आवश्यकता छ, पराकाष्ठाको राजनीति अहिलेको आवश्यकता होइन ।’
गान्जले दुई जना पूर्व सैनिक प्रमुखहरु र पूर्व अर्थमन्त्री याइर लापिडलाई पनि साथमा लिएका छन् । । उनीहरु राज्य सञ्चालन र प्रशासनमा निकै अनुभवी मानिन्छन् ।
जनमत सर्वेंक्षणले नेतान्याहूको लिकुड पार्टी र गान्जको ब्लू एन्ड ह्वाइट पार्टीले बराबर स्थान प्राप्त गर्नसक्ने देखाएका छन् । इजरायली संसदमा १२० स्थान रहेको छ ।
सर्वेक्षणमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने देखिएको छ । दुबैले ३०–३० स्थान प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले दुबै पार्टीले सरकार गठनका निम्ति अरु साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको सहयोग लिनु पर्नेछ ।
साना दक्षिणपन्थी पार्टीहरुले नेतान्याहूलाई समर्थन गर्ने सम्भावना रहेकाले पनि अबको प्रधानमन्त्री पनि उनी नै हुने सम्भावना छ । तर विगतमा भएका जनमत सर्वेक्षणका नतिजाहरु नमिलेकाले अहिल्यै चुनावी अडकल गर्न कठिन छ ।
चुनावका दिनसम्म पनि निर्णयमा नपुगेका मतदाताहरुको संख्या ठूलो रहेको मानिन्छ ।
नेतान्याहूले विजय हासिल गरेमा इजरायलका संस्थापक डेभिड बेन–गुरिअनकै समकक्षमा उनले इजरायलको सबैभन्दा बढी समय नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु हुनेछ । नेतान्याहू १३ वर्ष प्रधानमन्त्री रहिसक्नुभएको छ, र कतिपयले उनलाई ‘राजा बिबी’ भन्न थालेका छन् ।
तर चुनावमा विजयी भए पनि उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतमा मुद्दा पर्ने सम्भावना छ । महान्यायाधीवक्ताले नेतान्याहूमाथि ठगी, धोखाधडी र विश्वासघातको नाममा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने बताइसकेका छन् ।
अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि उनले राजीनामा गर्नु पर्नेछैन । संविधान अनुसार अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएमा मात्र प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन सक्दछ ।